Massachusetts Target PCB "Spot Hot" oo loogu talagalay Kala-goynta - Ellicott Dredges
Waxaa laga yaabaa 1, 1990
Source: Diiwaangelinta Iskuulada
Saraakiisha deegaanka ee Massachusetts waxay ku bixiyeen $ 14 milyan si ay uqarxiyaan una gubaan “meel kulul” oo ah biphenyls polychlorinated (PCB's) salka hoose ee dekedda New Bedford. Nadiifinta ayaa lagu nadiifiyey faaruqin ku taal aag 5-hektar ah oo ku yaal wabiga Acushnet halkaas oo qiyaastii 45% kiimikooyinka dekedda iyo wasakhda birta culus ay ku urursan yihiin.
Dekedda 1000-acre waxay leedahay uruurinta ugu sareysa qaranka ee PCB waana mid ka mid ah goobaha ugu xun ee ku jira Liiska Mudnaanta Qaranka ee Superfund. Qodaalidda “barta kulul” waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo u soo guuridda wasakhda habsami u socodka dekedda inteeda kale.
Nadiifinta wejigeeda koowaad, oo ay naqshadeeyeen Corps of Engineers, ayaa ku lug lahaa qodista ilaa 10,000 cu.yd. dusha hoose ilaa qoto dheer ugu badnaan 4-ft iyadoo la adeegsanayo Ellicott® Taxanaha Calaamadda '370 cutterhead dredge' oo ay maamusho Qandaraasleyaasha Badda ee AGM taas oo yareyn doonta faafitaanka jiirka. Waxyaabaha la jaleecay ayaa lagu shubi doonaa iyada oo la marin doono dhuun dhererkeedu yahay 3,000-ft oo dul sabaynaysa lana geyn doono goob qashin qub ah oo ku taal hareeraha biyaha ee New Bedford.
Maaddada waa la fuuqbixi doonaa, oo dheecaanka ka imanaya biyaha ayaa la daaweyn doonaa si looga saaro PCB-yada iyo biraha culus ka hor inta aan lagu sii deyn dekedda. Sariirta biyaha ayaa markaa la gubi doonaa, oo baabi'in doonta PCB-yada. Dambaska gubida oo ay ku jiraan biraha waa la adkeyn doonaa, laguna aasi doonaa laguna dabooli doonaa goobta si ku meel gaar ah. Mark Otis, oo ah injineer muwaadin ah oo ka shaqeeya xafiiska New England qaybta Corp ee Waltham, ayaa yidhi "Go'aaminta ugu dambaysa waxay ku xirnaan doontaa sida inta kale ee dekedda loo nadiifiyo."
Qorshaha “meel kulul” qodista iyo ka-qaadista dhulku waxay daba socotaa daraasad tijaabo ah oo ay ka mid tahay in la dhigo faaruqin wasakhaysan god dheer oo ka mid ah dekedda hoosteeda laguna xidho waxyaabo nadiif ah. “Kuma guuleysan inaan helno dabool nadiif ah oo dhab ah,” ayuu yiri Otis. Si kastaba ha noqotee, habka ayaa laga yaabaa inuu ku xirnaado wejiga labaad ee nadiifinta dekedda, ayay tiri afhayeen u hadlay Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka.
The Corps wuxuu bilaabay wajiga koowaad ee nadiifinta dhamaadka 1991.
Waxaa laga daabacay Diiwaangelinta Iskuulada